Jereo Ny Istanbul : Ny Politikan’ny Rafi-trano ‘ An’i John Lubbock · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2015 17:47 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Français, Español, Ελληνικά, English
Ny trano fitaizana zaza kamboty Grika fahiny tao amin'ny nosy Buyukada/Prinkipo akaikin'i Istanbul. Dikasary avy ao amin'ny Istanbul: Ny Politikan'ny Rafi-tranon'i John Lubbock
John Lubbock, nanoratra ilay lahatsoratra vao haingana tato amin'ny Global Voices mikasika ny asa fanorenana, ny fandrosoana tafahoatra sy ny fampiakarana ny fomba fiaina ho “borizano” tao Tiokia, dia miverina amin'ilay lohahevitra tao anatin'ilay fanadihadiana mahafinaritra novokarin'ny tenany ihany manindry ny fitrandrahana ireo tantara manankarenan'ny kolontsaina marolafy ao Istabul, ary mitondra fisaintsainana momba ny hoavy manana kolontsaina tokambolo tsy mitsaha-mitombon'lay tanàna.
Eto i Lubbock no manoritsoritra amin'ny fomba fiteniny ny Istanbul: Ny politikan'ny rafi-trano.
Hatramin'ny fotoana voalohany nahatongavako teto Istanbul, nahaliana ahy ny fomba nandrafetana ny tanàna, ny tontolo voaorina sy ny fomba nataon'ny olona hikolokoloany sy hifandraisany amin'izany. Samihafa amin'ny misy any Londona, izay niaviako. Ary raha ampitahaina amin'ny Eoropa Andrefana, betsaka ny tavela ho toy ny dindon'ny Ozymandias, ilay fanjakàna rava miparitadritka manodidina ny tanàna. Naniry hahafantatra bebe kokoa momba ny tantaran'ireny dindon'ny kolontsaina ireny aho, ary ny dikan'ny firongatry ny asa fanorenana ao anatin'ny fiarahamonina Tiorka amin'izao ankehitriny izao. Amin'io dia nanosika be ny fahatakarako ny psikojeografia sy ny fombandrazany, izay ny fotoana no toy ny tontolony. Ito ny famaritan'ny mpanoratra, Alan Moore ny atao hoe psikojeografia:
“Amin'ny endriny faran'izay tsotra, ny ahafantarako ny psikojeografia dia ny fanekena mivantana fa isika, amin'ny maha-olombelona, dia fitambaran'ny endriky ny toe-tsaintsika…fahatsiarovana, fikambanan-javatra, anganongano ary fombafomba…ao anatin'ny tontolo izay manodidina antsika.”
Araka izany, ny fikasako dia ny hahita izay ambaran'ny rafi-trano ao Istambul momba ny rafitry ny toetsaina Tiorka, na taloha io na ankehitrio, ary ny zavatra azontsika ianarana mikasika ny kolontsaina Tiorka sy ny politika vokatr'izany.
Manatanteraka tetikasa iray hafa aho momba ny fankalazàna ny faha-100 taonan'ny Vonomoka Armeniana, ary ny valin-kafatra momba io hetsika io ao anatin'ny fiarahamonina Tiorka. Be ny ho voasoratra momba io hetsika io, ny 24 Aprily, ary ho ahy dia toa manan-danja be ny hahafantarana ny fomba fahitàna io tantara io ao anatin'i Tiorkia, indrindra fa hoe ny tanjon'ny ankamaroan'ireo vondrona Armeniana dia ny haneken'ny fanjakana Tiorka fa famonoana olona faobe araka izay ahafantarantsika azy amin'izao fotoana izao no zava-nitranga tamin'ny 1915. Inona no sakana politika, psikolojika ary sosialy tsy hisian'io fanekena io, ary ny fampihavanana ireo kolontsaina samihafa mety haterany? Misy fanontaniana tena mahaliana mihitsy ho an'ny olona tahàka ahy izay liana amin'ny fomba hisorohana ny hadisoana miverimberina ka nitarika nankany amin'ny fangirifiriana fatratra tamin'ny lasa.
Azoko antoka fa misy ireo Tiorka nasionalista, hatramin'ireo vondrona Armeniana, izay tsy hiombon-kevitra amiko amin'ny fandalinana nataoko mikasika ireo olana ireo, saingy ny tena manan-danja indrindra dia ny hisian'ny fifanakalozana hevitra momba ny fiantraikan'ny lasa amin'ny tontolo ankehitriny, fa tsy ny famafàna sy fanilihana ireny ratra ara-tsaina ireny ho any ambany karipetran'ny tantara, toerana izay toa tsy hiafenany ela akory .
Azo jerena eto ny fanadihadiana feno:
2 andro izayKyrgyzstan